Sawirro-Madxaf Lagu Kaydiyo Xusuusta Xiriiradii Go’ay Oo Dadbadan Soo Jeetey.
Matxafka Xiriirada Go’ay wuxuu kamid yahay goobaha si la yaabka leh loogu dalxiiska tago caalamka. Halkan, dadka imaanaya waxay u riyaaqaan daawashada dhammaan nuucyada sheekooyinka iyo agabyada xusuusashada leh oo ay ku deeqaan dadka qalbi-jabku soo gaaro ee dunida dacalladeeda isaga yimaada.
Olinka Vistina iyo Drazen Grubisic, oo labaduba qalbi-jab ku dhacay sanadkii 2006 waxay go’aansadeen inay furan Matxafka Xiriirrada Go’ay markii ay garwaaqsadeen sida ay u adag tahay in laga quusto walxaha xusuusta reeba oo jaceylkii lumay ka hara. Tallaabadan waxay awoodi karaan inay agabyada isku ururiyaan. In yar kadib, labaduba waxay ogaadeen in dadka kale ee aramida jaceylka la tiihaya ay sidooda kale ku deeqayaan agabyada xusuusta leh ee jaceylkii ka lumay.
Kahor inta aan sal-dhiggiisa buuxa laga sameynin Zagreb – caasimadda Croatia, dalxiisayaal ka kala imaanaya Istanbul ilaa New York ayaa isugu yimid. Sawirrada, saacadaha, jijimaha, waraaqaha jaceylka iyo dhammaan hadyadaha la isasiiyay waxay kamid yihiin agabyada lagu keydiyo Matxafka.
Olinka Vistina waxay sheegtay in badi dadka ku deeqa hadyada ay ka yimaadaan dalka Britain taas oo la micno ah in qalbiyo badan aad ugu dhaawacan yihiin dalkaas. Furitaankiisu wuxuu u muuqdaa mid guuleysanaya. Waxaana toddobaadkiiba soo booqda dad ka badan 1,000 qof.